Ngaba ubulungisa base-US bonakalisiwe? Amaxhoba e-B737 amaXa ayengenalo ithuba ngokuchasene neBoeing
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Ngaba ubulungisa base-US bonakalisiwe? Amaxhoba e-B737 amaXa ayengenalo ithuba ngokuchasene neBoeing
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zase-Ethiopia eziQhekezayo • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo • iindaba • abantu • Safety • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Angabiza njani umntu ukuba umtshutshisi kwityala eliphambili lenkampani enkulu (iBoeing) ujoyina inkampani yezomthetho eyayikhusela elona tyala lakhe likhulu kwinyanga emva kwetyala. Kuthekani ngokubiza i-Boeing modus operandi, okanye i-US Justice iyaliwe?
Abantu abangama-346 basweleke ngo-2019 kwiingozi ezimbini ze-Boeing 737 MAX eziphaphazela kwi-Ethiopian Airlines e-Ethiopia nangaphambi kwe-Lyon Air flight e-Indonesia. Ityala lolwaphulo-mthetho ngokuchasene neBoeing lagqitywa ekuqaleni kwalo nyaka ngesivumelwano sokutshutshiswa esimiselweyo, kwaye iyabonisa ngoku ukuba kutheni.
IBoeing yinkampani yokuvelisa iinqwelomoya ese Seattle enekomkhulu lendibaniselwano eChicago, eIllinois. Kutheni le nto isikhalazo solwaphulo-mthetho ngokuchasene neBoeing sigwetywe eFt. Ixabiso, eTexas?
Ifemu yomthetho wezokhuseleko iBoeing eKirkland kunye no-Ellis benze isivumelwano esimnandi nomtshutshisi ophambili wase-US u-Erin Nealy Cox. Kwiinyanga emva koku u-Erin Nealy Cox wayeka umsebenzi wakhe obalaseleyo kurhulumente kwaye wajoyina i-Kirkland kunye no-Ellis ephakamisa ukurhanelwa kwenkqubo ephekiweyo.
Ityala le-Boeing yolwaphulo-mthetho lalenzelwe ukuzisa ubulungisa kwiintsapho ezingama-346 zabo basweleka kwi-Airlines yase-Ethiopia kunye nengozi yeLion Air. Iziphumo zeli tyala laseTexas kukuba akukho gosa liphezulu leBoeing lahlawulwayo.
Nge-7 kaJanuwari kulo nyaka eTurboNews ipapashe inqaku nguPaul Hudson, intloko yeqela lamalungelo abathengi beenqwelo moya Amalungelo amaflaya. Wabhala: I-Boeing ihlawuliswe i-737 Max iyelenqe lobuqhetseba, ukuhlawula ngaphezulu kwe- $ 2.5 yezigidigidi.
Ingxelo epapashwe namhlanje kwi Intatheli yoLwaphulo-mthetho utyhile iinkcukacha zolu lungiselelo ebonisa ukuba igqwetha elikhokelayo elitshutshisa eli Sebe Lezobulungisa lase-US, owayesakuba liGqwetha lase-US u-Erin Nealy Cox wajoyina inkampani yezomthetho efanayo iBoeing awayeyiqeshile ukuzithethelela kwityala eliphezulu awatshutshisayo.
Ukugcwalisa ityala ngokuchasene neBoeing eFt. Ixabiso, iTexas yayimangalisa kwasekuqaleni okoko iTexas yayingenalo unxibelelwano kuyo nayiphi na le nto.
Ngokwengxelo, ityala lagqitywa ngesivumelwano sokumiswa kwetyala. Esi yayisisivumelwano uNjingalwazi woMthetho waseColumbia uJohn Coffee ngelo xesha esasibizwa - "sesinye sezona zivumelwano zitshutshisayo zimisiweyo ndizibonileyo."
Intatheli yoLwaphulo-mthetho ipapashe impendulo evela kuMichael Stumo noNadia Milleon, abaphulukene nentombi yabo eneminyaka engama-24 kwingozi yenqwelo moya yase-Ethiopia.
“Besicaphukile ukuba abatshutshisi beSebe lezoBulungisa basike isivumelwano sokuthandana neBoeing eyayeka (umphathi wangaphambili we-Boeing) u-Dennis Muilenberg kunye nabaphathi be-Boeing kunye namalungu ebhodi ukuba baphume ecaleni ngenxa yokungakhathali kwabo kunye nobuqhophololo obubangele ukubhubha kuka-Samya ngelixa babetyebisile ngokwabo, ”utshilo uStumo kunye noMilleron kwingxelo ephendula ezindaba. “Besididekile ukuba kutheni isiThili saseMantla saseTexas sikhethwe liSebe lezoBulungisa kuba akukho nanye kwezi zenzo zolwaphulo-mthetho enento yokwenza nesithili. Ngaba yayingumgwebi ovumayo ukuba uBoeing akholiswe? Ngaba yayingabatshutshisi abathobelayo ababelazi iqela lezokhuselo lolwaphulo-mthetho likaBoeing? Olu lwazi olutsha olothusayo. ”
UPaul Hudson weqela labathengi Amalungelo amaflaya xelelwe eTurboNews Ityala “ngumzekelo womnyango ojikelezayo apho amawaka abantu ababesakuba ngurhulumente besiya kusebenza kumaqela ababewalawula njengamagosa aseburhulumenteni. Kodwa umnyango ojikelezayo awufanelanga ukuba ube yibhanti yokuhambisa. ”
U-Hudson uqukumbele ngelithi: "Ukuba umtshutshisi oyintloko ujoyina iqela elichasene nolwaphulo-mthetho okanye inkampani yakhe yokhuselo kungekudala emva kokumela urhulumente wase-US kwityala elinxulumene nolwaphulo-mthetho, kuphakamisa inkxalabo yenkangeleko kunye nemicimbi yokuziphatha,"